अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो ?
कार्यालयमा प्राप्त भएका र कार्यालयबाट गएका पत्रहरुको अभिलेख सुरक्षित रुपमा भविष्यमा खोजेको बेला छिटो छरितो रुपमा कागजपत्रहरु पाउने गरी राख्नुलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ । कार्यालयमा कागजातहरु प्राप्त भएपछि जतन गरी राख्ने र प्रयोगहीन भएपछि धुल्याउनेसम्मका क्रियाकलापलाई अभिलेख व्यवस्थपन भनिन्छ ।
यसका उद्धेश्य यस प्रकार छन् ।
१. कागजपत्रको सुरक्षा गर्न
२. कागज पत्र पुनः प्रयोगमा ल्याउनु
३. खोजेको बखत सजिलैसँग भेटिनु
४. समयको बचत हुनु
५. स्थानको बचत हुनु
६. आगो, पानी, घामबाट बचावट गर्नु
७. भविष्यमा प्रमाणको रुपमा देखाउनु
1 नयाँ नेपाल कोष
2 Career News and Info चैत्र १७, २०७३
3 चन्द्रमाको यात्रा अब व्यवसायिक
4 आठौं साफ च्याम्पियनसिप
5 बर्तमान राष्ट्रियगान
7 Career News and Info अाश्विन ४, २०७४
8 DRP खारेज
10 Members of security Council